Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo daah-furay ololaha afurinta qoysaska danyarta ah – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaGudoomiyaha gobolka Banaadir oo daah-furay ololaha afurinta qoysaska danyarta ah
Hiiraan Xog, May 17, 2018:- Guddoomiyaha G/Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa maanta daah-furay olole lagu afurinayo 15 kun oo qoys. Maamulka Gobolka Banaadir ayaana Sanadkii labaad afurinaya Bulshada danyarta ah ee ku nool Magaalada Muqdisho.
‘’Maamulka Gobolka Banaadir wuxuu u taagan yahay gacan qabashada danyarta Soomaaliyeed, maadaama ay bilatay bishii barakaysnayd ee Ramadan kuligeen waxaa waajib nagu ah gurmad iyo gacan qabasho loo fidiyo walaalaheena aan wax haysan, tani waa bilow lagu afurinayo 15kun oo qoys balse waa in loo istaagaa sidii intan looga badin lahaa”.Ayuu yiri Eng. Yarisow Duqa magaalada Muqdisho.
Wasaarada Amniga oo ka hadashay weeraradi xalay ka dhacay magaalada Muqdisho